SuperX OS, isina kureruka distro ine yakasarudzika KDE | Linux Vakapindwa muropa
SuperX OS, isina kureruka distro ine yakasarudzika KDE
Nyika yeLinux distros inogara iine zvinhu zvinonakidza kutiratidza, uye ndezvekuti mushure mezvose isu hatisi kuzongogara chete Ubuntu, Debian, Fedora kana Linux Mint (kutaura zvimwe zvakakosha) asi pane zvakawanda zvingasarudzika kuchinjisa timu yedu kune zvese zvinodiwa. Nhasi tichataura nezvazvo Super X OS, distro iyo inouya kubva kuruoko rwekambani inonzi LibreSoft, ine Ubuntu naDebian sechigadziko uye nekuwedzera yakasarudzika KDE desktop.
Iyo distro inoburitsa vhezheni nyowani mwedzi gumi, kuyedza kuremekedza izvo kuti zvirambe zviripo, kunyangwe iine khalendari isina kuomarara sezvinoitika kune iyo 'hombe'. SuperX OS 3.0 "Nyasha" Yakaburitswa mavhiki mashoma apfuura, uye mashandiro ayo uye dhizaini yakanaka zvekuti inogona kushandiswa nemavetera munyika yeLinux vasina kusangana nemipimo, kunyangwe kana chinangwa chayo chikuru chiri imwe nzira yeavo vanouya pachikuva ichi kubva paWindows.
SuperX OS is a distro ine zvishoma zvine mwero zvishoma zvinodiwa, iine 1Ghz chete maererano neprosesa uye 1GB ye RAM, chimwe chinhu chisingakwanise kukwikwidzana nemamwe madististist akadai sePuppy Linux asi yakanangana nemushandisi anoda desktop inokwezva pasina kuranga hardware. Chinhu chacho ndechekuti inouya ne KDE 4.13.3, sarudzo ingadai isingave iri mupfungwa dzevagadziri ve 'lightweight' runyorwa, uye yakanyatsobatanidzwa uye yakasarudzika zvekuti hautomboona kuti tiri kushandisa desktop yedenga rakanyanya: ine rima plasma theme uye mamwe manomano kugadzirisa mashandiro, semuenzaniso kushaikwa kweChiitiko kana kushandisa Nyasha, iyo inodzvinyirira asina kushandiswa ndangariro mapeji pane kuatumira iwo kuchinjanisa chikamu.
Iyo SuperX OS inosimudza inotibvumidza isu kuti tiise ese madhiri edzimotokari uye macodec, chimwe chinhu icho chechokwadi chiri chakakosha kuti unakirwe neLinux desktop isina zviyero. Kumwe kubata kunonakidza kweiyi distro ndeyekuisa mamwe maLinux Mint maitiro uye ekugadzirisa maturusi, asi akagadziridzwa kuSuperX OS nenzira yekuti, semuenzaniso, MintSource inova SuperX Source. Tinotaura nezvazvo KDE desktop asi zvinoramba zvichitaura zvimwe zvezvinhu zveiyi distro: Linux kernel 3.13, apt-fast (rudzi rwekunatsurudzwa uye nekukurumidza Apt-tora), Chromium, Firefox (default browser), LibreOffice, GIMP, Minitube uye VLC senge vhidhiyo vatambi, Teregiramu uye zvimwe zvakawanda.
Super X OS zvinogona kunge zvatove yakadhindwa kubva kuSourceForge, ine shanduro dze32 uye makumi matanhatu nematanhatu uye mune iyi vhezheni 64 «Nyasha», nerutsigiro kusvika Kubvumbi 3.0.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » SuperX OS, isina kureruka distro ine yakasarudzika KDE
mmm inonakidza sei, inogona kunge iri sarudzo hombe pamalaptop uye nekudaro ichidzivirira kupisa kukuru kwekushandisa kumwe chete uye kushoma uye ruzha rwe fan. Zvinogona kuve zvakanaka kushandisa pane iwo makomputa pasina kusiya iro simba re kde nemaapplication ayo.